Brats ọ dị mma karịa nkịta na-ekpo ọkụ? – Wikipedikia Encyclopedia?
Nri & ihe ọ drinkụ drinkụ
Pụtara & Nkọwa
&Lọ & ubi
ụdị na ejiji
Achicha na ichi
ahụike dị ndụ
Press ESC imechi
Brats dị mma karịa nkịta na -ekpo ọkụ?
Ndị editọ Wikipedia
Kedu maka ahụike - bụ otu mma maka gị karịa nke ọzọ? N'ezie, isi ihe dị iche iche calorie dị na nha. Na nkezi, otu bratwurst, na-enweghị bun, bụ calorie 283 na gram 24.8 nke abụba. Otu ọkọlọtọ nkịta na-ekpo ọkụ, na bun, bụ calorie 242 na gram 14.5 nke abụba (4).
N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike iri raw bratwurst?
bratwurst fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a na-ere ya n'ụlọ ahịa dị ka a ndu anụ ngwaahịa. Nke ahụ pụtara, n’adịghị ka ọ bụ nwa nwanne nna ya dị ọkụ nkịta, ọ naghị esighe ma mma na eri kwa ntuziaka nri USDA maka anụ ezi. N'okpuru ala ị achọghị ịrịa ọrịa na-eri nri anụ.
Ọzọkwa, Brats kwesịrị ịbụ isi awọ? Maka soseji anụ ehi, a na-agbanye anụ ahụ ma gwakọta ya na nnu na ngwa nri. Mgbe a na-esi ya, sausaji buru ibu na-esi na pink gaa na agba aja aja, dabere na ogologo oge ọ na-ekpo ọkụ. N'ihi na ejikọtara njikọ na casings na-adịghị ahụkebe nke na-adịghị enwe mgbanwe agba dị egwu mgbe esichara ya, sausaji emechara nwere ike ịdị ntakịrị. isi awọ.
26 Ajụjụ na Azịza Yiri nke Achọtara?
Kedu nke ka njọ anụ ezi ma ọ bụ soseji?
Ndi Johnsonville brats buru uzo?
Soseji Ịtali nwere nitrates?
A na-esikwa tuna tuna eme anụ?
Johnsonville brats ọ dị mma?
Gịnị kpatara nitrates ji dị njọ nye gị?
Kedu ka esi esi sie brats a na-esighi esi?
Kedu otu esi esi esi nri brats n’agwaghị ha?
Kedu ka ị si mara na esi nri soseji?
Ị nwere ike ịzụta anụ ezi na-enweghị nitrates?
Bacon ọ dị njọ?
Costco ọ na-ere Johnsonville brats?
Kedu ka esi esi nri brats Johnsonville mbụ?
Kedu nri ndị nwere nitrates dị elu?
Kedu ụdị ọrịa kansa nitrates na-ebute?
Ndị ọrịa mamịrị nwere ike iri bratwurst?
Enwere sausaji dị mma?
Ị na-eri casing na bratwurst?
Kedu ka chorizo ​​​​dị njọ nye gị?
Sausages ọkụkọ ọ dị mma?
Enwere m ike isi nri Johnsonville brats na oven?
Ị kwesịrị ị na-ewepụ soseji tupu ị esi nri?
Ị nwere ike iri Johnsonville Italian Sausage Casing?
Kedu brats kacha mma ịzụta?
Sausaji ọkụkọ ọ dị mma karịa anụ ezi?
Kedu ka sausaji dị njọ?
Kedu ihe kpatara akpụkpọ soseji ji sie ike ugbu a?
A na-edozi anụ ezi sitere na anụ anụ?
A na-edozi soseji ọkụkọ anụ?
Agbanyeghị na anụ abụọ nwere abụba na abụba juru eju, njikọ abụọ nke sọseeji ga-eri gị ntakịrị kalori na abụba karịa ibe atọ anụ ezi. 2 anụ ezi sọseeji Njikọ nri ụtụtụ (45 g) nwere calorie 140, gram 12 abụba, gram 4 jupụtara abụba, 30 mg cholesterol, protein gram 7, na 310 mg sodium.
Oge a na-eji ahịhịa na ngwa nri na-atọ ụtọ, nke a adịchaghị mma, sie ya nke ọma nwa ara dị njikere maka menu ọ bụla. Onye ọ bụla brat iche iche na-eji anyị kpara ekpomeekpo ịnapụta a pụrụ iche bratwurst ahụmahụ.
Ọzọkwa, dị ka ndị ọzọ kwuru, brats na ndị ọzọ na-adịghị mma sausaji agaghị enwe nitrates. Chọghị nwere esi nri salami n'ihi na a gwọrọ ya. Ị nwee esi nri ihe dị ka bratwurst na soseji Italian ebe ọ bụ na ha niile bụ anụ e ghere eghe n'ọkụ nke a na-etinye n'ime akpa na ude ụfọdụ.
The Mkpọ A na-emechi ma sie ya ike iji gbuo nje ọ bụla, nke na-esikwa ya anụ. Ya mere mkpọ tuna is esichara anụ.
Johnsonville nwere kacha mma bratwurst N'ebe ahụ, ha bụ kemmiri ihe na flavorful. Nke a bụ naanị ika nke nwa ara Ana m eri nri, ihe ọ bụla ọzọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ na-amasị m ịme ihe ndị a ma ọ bụ ighe ha ma jiri ha mee ihe kama nkịta na-ekpo ọkụ mgbe niile! ezi price na nnọọ tọrọ ụtọ !!
sodium nitrate, ihe eji egbochi ihe eji arụ nri, dịka anụ ezi anụ ezi, anụ arụ na nri ehihie, nwere ike ibute ọrịa obi gị. Echere na sodium nitrate nwere ike imebi akwara ọbara gị, na - eme ka akwara gị kpọkwuo nkụ na warara, na-ebute ọrịa obi.
Achịchaghị ya ọhụrụ bratwurst nwekwara ike parboiled na mgbe ahụ grilled. Iji parboil, tinye sausaji n'ime ite ma jiri mmiri kpuchie ya. Weta na obụpde. Belata ọkụ ma kpoo, ekpuchighị ya, maka minit 10-15 ma ọ bụ ruo mgbe anụ ahụ adịkwaghị pink na temometa anụ na-agụ 160 Celsius.
A Hazie Anụ bụ anụ ọ bụla a gwọchara, tinye nnu, see anwụrụ, ma ọ bụ chekwaa ya n'ụzọ ụfọdụ, iji gbanwee uto ya ma ọ bụ gbatịa ndụ. Anụ ezi, sausaji, ham na salami niile Hazie anụ.
Iji chọpụta ma emechaala, ị nwere ike jiri temometa anụ tụọ okpomọkụ dị n'ime. Sausages kwesịrị iru 155-165 ° F (68-74 ° C). N'aka nke ọzọ, sie ha na mbụ esi nri na pan ma ọ bụ na imi ihe nwere ike ịgba mbọ hụ na ha zuru oke esighe ma nọgide na mmiri.
Ngwaahịa ndị a na-eji "okike" isi mmalite nke otu kemịkalụ dị ka celery na beet ihe ọṅụṅụ na oké osimiri nnu, na ha enweghịzi onwe ha. nitrates na ihe nitrites karịa ọkọlọtọ gwọrọ anụ. N'ezie, ha nwedịrị ike ibu karịa nitrates na ihe nitrites mgbe a na-agwọ ya site na iji ihe nchekwa "eke". Enweghị ihe kpatara ya zụta nitrate-free, enweghị ọgwụgwọ anụ ezi.
Bad ozi: Anụ ezi nwere ọtụtụ abụba - ndị ọjọọ ụdị.
Ọnụ abụba abụba bara ụba na anụ ezi na-akọwa ihe kpatara otu ounce nke anụ ezi nwere cholesterol 30 milligram. Nnyocha e mere egosila na iri nri nwere abụba zuru oke nwere ike ibute oke ihe egwu nke ịrịa ọrịa obi na ọrịa strok.
Johnsonville Original bratwurst ngwugwu 56 ounce. 14 njikọ n'ime, Costco na-enye nnukwu mkpọ a Johnsonville Original bratwurst sọseeji at naanị $9.99, siri ike ịkụ maka ego ahụ. Johnsonville Original Brats na-atọ ụtọ nke ukwuu mgbe a ghere ha ọkụ.
Nke a bụ nri iri kacha mma iji bulie ọkwa nitric oxide gị.
Beets. Beets bara ụba na nitrates nri, nke ahụ gị nwere ike ịtụgharị gaa na nitric oxide.
Chocolate gbara ọchịchịrị.
Mkpụrụ na Mkpụrụ.
High nitrate enwere ike jikọta oriri na mbelata ihe ize ndụ nke gastric cancer, ebe oriri nitrite nwere ike ịbawanye ohere nke glioma na thyroid na gastric ọrịa cancer. N'oge a, ọ dịghị ọmụmụ egosila na-agbanwe agbanwe njikọ n'etiti elu oriri nke nitrate ma ọ bụ nitrite na ụdị ndị ọzọ ọrịa cancer.
Cheta na ihe ndị a nwere abụba juru eju, kọlesterol, na kalori ma nwee ike ibuli ọkwa cholesterol ọbara ma ọ bụrụ na a na-eri ya mgbe niile. Anụ ezi: Spareribs, anụ ezi ala, soseji anụ ezi. Soseji, dị ka bratwurst, Italian, knockwurst, Polish, smoked. Nkịta na-ekpo ọkụ (1)
Ee ị nwere ike. Lee ọnụ ọgụgụ: anụ ezi sọseeji nwere calorie 290-455 na gram 23-38 nke abụba kwa njikọ. Turkey na ọkụkọ sọseeji nwere calorie 140-160 na gram 7-10 nke abụba maka otu ego ahụ. Nke ahụ bụ narị narị calorie na abụba gram dodged kwa njikọ.
Sọseeji casing bụ "akpụkpọ anụ" nke na-ekpuchi n'èzí nke soseji. Ee, ị na-eri nri ya, ọ bụ akụkụ nke soseji. Would ga- naanị wepụ ha ma ọ bụrụ ị'na-anwa imebi/mebie soseji. Sọseeji ihe mkpuchi bịa n'ụdị abụọ: anụmanụ, na sịntetik.
Sọseeji abụghị nri ahụike
Ọ dị mma ka ọ dị, chorizo bụ nnukwu kalori, abụba, nri sodium dị elu. Otú ọ dị, ọ dị obere obere carb — ọ na-adabakwa n’ihe ndị na-eri nri.
Ee, ihe ka ọtụtụ 'n'erughị afọ' anụ ezi na-gwọrọ n'ezie na celery (ihe ọ juiceụ juiceụ ma ọ bụ ntụ ntụ), nke bụ eke na-esi nitrates. A na-akpọ ya mkpuchi n'ihi usoro ịdebanye aha, ọ bụghị n'ihi na a gwọghị ya nitrates.
Ejuju nke ọma sọseeji na ikuku n'etiti casing na anụ ga-eme ka nkụ casing. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na sọseeji a na-ejupụta nke ukwuu tightly, na casing a ga-agbatị ruo oke ya ma nwee ike ịbụ siri ike.
Nzuzo igbe ruo 350 Celsius. Tinye thawed njikọ 1 nke anụ ọhịa dị na mpempe akwụkwọ a na-ede akwụkwọ. Ime maka nkeji 15-18 ma ọ bụ ruo mgbe okpomọkụ njikọ dị n'ime ruru 160 ° F na soseji na-acha aja aja, na-atụgharị njikọ otu ugboro.
ee, casseji casing bụ oriri. ọtụtụ oge ị hụ ka ndị mmadụ na-ewepụ ihe casing ọ bụ n'ihi na ha chọrọ anụ "nke otu ụtọ ahụ" mana ọ bụghị na "sọseeji ụdị" - ya bụ, ha chọrọ ka anụ ahụ gbarie n'ime efere.
Etinye ihe na bratwurst na mmiri ma ọ bụ biya biya n’elu ọkụ dị ọkụ na gị imi. Tinye ụfọdụ eyịm chopped ma ọ bụ sauerkraut, ma mee ka ụtọ na ihe ọicesụ juụ na-amalite, na-akpali oge ụfọdụ. Debe ngwakọta dum na aluminom pan na gị imi.
Enwere eke sọseji casings na ụdị sịntetik, na ọtụtụ n'ime ha bụ oriri. Mgbe ọtụtụ sọseeji ndị hụrụ ga- esi nri a sọseeji na ya casing, enwere oge mgbe casings nwere ike wepu ya.
Nke ọ bụla n'ime "nnukwu atọ" bụ mma: Johnsonville, User's ma ọ bụ Klement's - nke ndị User's masịrị m kasị mma mana enwere ike ịhụ Johnsonville n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa nri mpaghara ọ bụla. Enweela m onye mmeri ukwu Miesfeld nwa ara n'otu oge nri ma ha dị ịtụnanya. Great itule nke ngwa nri.
Ọ bụrụ na ị nwere nhọrọ nke ịzụrụ site n'ebe a na-egbu anụ ma ọ bụ ebe a na-ere anụ, nke na-abụghị nke ebujuru ya, soseji ọkụkọ ga-abụkarị mma. Soseji anụ ezi nwere calorie 290-455 na gram 23-38 nke abụba kwa njikọ. Soseji ọkụkọ nwere calorie 140-160 na gram 7-10 nke abụba maka otu ego ahụ.
Sausaji ọ dịtụbeghị mgbe a maara dị ka nri kasị mma. Ma gịnị mere ha ji dị ize ndụ? Ihe na-akpata ọgba aghara niile bụ kemịkalụ a na-akpọ nitrites na nitrates, bụ́ nke otu mgbe n’ime ahụ nwere ike ime ka ọ bụrụ ogige na-akpata ọrịa kansa.
Hazie Agbanwela anụ ka ọ gbasaa ndụ ya ma ọ bụ gbanwee ụtọ ya na ụzọ ndị bụ isi bụ ise siga, ịgwọ ọrịa, ma ọ bụ ịgbakwunye nnu ma ọ bụ ihe nchekwa. Hazie anụ na-agụnye anụ ezi, sausaji, nkịta na-ekpo ọkụ, salami, ọka ọka, anụ ehi na ham yana anụ mkpọ na nri ndị dabeere na anụ.
Achicha na ichi, ihe omume na ebe nkiri, nri na ihe ọṅụṅụ, zoos na aquariums
Ewu nwere ike iri lili canna?
Igwe ọkụ ngwakọ mmiri ọ ga-ajụkwa ebe ndọba ụgbọala?
Gara aga Akụkọ
Wikipidikia.org - Smart azịza gị amamihe ajụjụ ➡ Jụọ ajụjụ, ịkọrọ ihe ọmụma, izute na-akpali ndị mmadụ